Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo Si Adag Uga Hadlay Xeerka Kufsiga ee Somaliland | Baligubadlemedia.com
Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo Si Adag Uga Hadlay Xeerka Kufsiga ee Somaliland
Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir, ayaa sheegay inaan ummadu maalin walba xeer xiimaya oo xun ma horjoogsan karine, ay waxyiga samaawiga ee Ilaahay u dooray ku deystaan.
Xeerkan Kufsiga waxa ku dhaqmi jiray oo lahaa dalka Talyaaniga kun sagaal boqol iyo dhowr iyo soddonkii, wuuse iska bedelay, kii ayaa la soo qaatay. 1993-dii ayaa baarlamaankeena la keenay, oo Madaxweynahii wakhtigaasi keenay, sidan oo kale ayaan khudbadaha uga dignay, waa 25 sannadood ka hor, wuu noo yeedhay
oo yidhi maxaad ku diidan tihiin, waxaan nidhi waanu ku soo tusi. 11 Culimmo ayaa wakhtigaa loo saaray, 125 qodob oo Diinta khilaafsan ayaan ka soo saarnay. Halkii baa lagu joojiyey, isagoo ayaa immikana waslad ka mid ah nimankii berrigaa wadday, ay soo celiyeen markii ay isyidhaahdeen diintii waa laga caajisay.